Shina: Mpanao Fihetsiketsehana Nosamborina Noho Ny Sora-bavety Miresaka Zon’olombelona Tao Amin’ny Fihetsiketsehana Tsy Tia Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2017 7:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Aymara, English
(Marihina fa tamin'ny 17 Septambra 2012 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mihamaro hatrany ny mino fa nahazo fanohanana ara-bola avy tamin'ny fanjakana ny hetsi-panoherana tamin'ny faran'ny herinandro izay tsy tia an'i Japana tany amin'ny tanàndehibe maherin'ny 80. Nampiseho ny fisamborana ireo mpanao hetsi-panoherana miisa telo tao Shenzhen izay nanao fihetsiketsehana am-pilaminana teo afovoan'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy tia Japoney an'arivony omaly fa nanara-maso tsara sy nahafehy ny hetsi-panoherana ny mpitandro ny filaminana.
Araka ny vohikalam-baovaon'ny ONG mpiaro ny zon'ny olom-pirenena, canyu.org [zh], mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona miisa telo no nosamborina tamin'ny 16 Septambra 2012, nandritra ny hetsi-panoherana tsy tia Japana:
(Fampahalalam-baovao fohy navoakan'i Canyu tamin'ny 16 Septambra 2012) Io maraina io, natao tao amin'ny faritra afovoan-tanànan'i Shenzhen, manodidina ny Huaqiang Avaratra sy ny Foiben'Olompirenena ny fihetsiketsehana goavana manohitra an'i Japana. Nanararaotra ny fotoana tamin'ny fanambarana ny fanirian'izy ireo ho amin'ny fahalalahana, ny demaokrasia ary ny zon'olombelona ireo olom-pirenena demaokraty ao Shenzhen tahaka an'i Jiang Weidong, Ziyuan. Nanatevin-daharana ny famoriam-bahoaka izy ireo, nihazona sora-baventy mivaky hoe: Fahalalahana, Demaokrasia, Zon'olombelona ary Lalàmpanorenana. Nahita azy ireo ny polisy miafina misahana ny filaminana ary nisambotra azy ireo teo amin'ny tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro teo. Tsy azo antso intsony izy ireo nanomboka teo. Notapahana ny findain'izy ireo.
Miangavy anao mba ho mailo! Ny laharan'ny finday ahazoana anay dia 15167233712
Nanao hetsi-panoherana ho amin'ny demaokrasia nandritra ny fihetsiketsehana tsy tia Japana ny mpikatroka Shenzhen miisa telo mpiaro ny zon'ny olom-pirenena . Nosamborin'ny polisy miafina avy hatrany izy ireo . Sary avy amin'ny canyu.com
Ny sombin-baovao etsy ambony dia nanamafy ny fanamarihan'ny C Custer momba ny anjara asan'ny polisy tao amin'ny hetsi-panoherana tsy tia an'i Japana :
Tahaka ny olona maro manerana izao tontolo izao, nandany andro vitsivitsy tamin'ny fijerena sary sy tatitra momba ny hetsi-panoherana tsy tia Japana any Shina aho. Misy ny fanangonana tsara tamin'izany eto ho an'ireo izay liana amin'izany… ho an'izay rehetra nanao hetsi-panoherana tao Shina teo aloha, ny tonga ao an-tsainao manaraka dia ny hoe: aiza àry ny polisy rehetra?
Andeha ary ampitahaintsika amin'ny sary avy tamin'ny hetsi-panoherana “hetsika revolisiona Jasmine” tao Beijing izany, tranga iray kely loatra ka tsy nahitana fiara nahongana, nirehitra, na korontana, ary tsy nahitana mpanao fihetsiketsehana mihitsy aza. Fa nisy polisy anefa tao …
[…] Lehibe ny porofo fa minia tsy mijery ireo hetsi-panoherana ireo i Shina. Mibaribary mazava ny tsy fisian'ny mpitandro ny filaminana ao Shina, indrindra raha oharina amin'ny isan'ireo olona marobe izay miseho eo anoloan'ny lopy sy ny fakantsary isaky ny misy hetsi-panoherana izay tsy ankasitrahan'ny governemanta Shinoa. Nasehon'i Shina mazava fa manana ny fahaizana rehetra hifehezana ny hetsi-panoherana tsy tia Japana izy raha toa ka ilaina izany. Ny tsoa-kevitra mazava ankehitriny – ny hany tsoa-kevitra tokana amin'izao fotoana izao – dia ny hoe tsy mila manao izany izy.